Resaky ny mpitsimpona akotry : fisitrahana zo an’olom-pirenena roa tonta | NewsMada
Lasa raharaha, na tsy miteraka olana aza dia mitarika adihevitra lehibe io filolohavan’olona ao aminy zo an’ olom-pirenena roa samihafa any amin’ny firenena maro amin’izao fotoana izao. Ny ao Frantsa moa noho ny fampihorohoroana ataon’ireo mpiray dia amin’ny Daesh izay ahitana olona avy amina firenena maro, dia eo am-pandinihina volavolan-dalàna anavaozana ny lalàmpanorenana, ka mikendry ny fanongotana ny zom-pirenena frantsay avy amin’ireo tratra nandray anjara niaraka tamin’izany fikambanana mampihorohoro an’izao tontolo izao. Tetika fomba fiarovan-tena ny an’ny Frantsay, ary mbola tsy lany ho lalàna satria mbola eo am-piadian-kevitra izay lasa resabe mila hampisaraka ny mpiray dia.
Any Algérie koa eo amin’ny fandinihina lalàna fanitsiana ny lalàna fototra dia misy andininy mikasika ireo olona misitraka zo an’olom-pirenena hafa ivelan’ny maha olom-pirenena azy. Tsotra ny tapak’ilay lalàna vao lany omaly : tsy afaka milatsaka amina fifidianana ireo olona miloloha zo roa. Mipetraka hono ny ahiahy mikasika ny mety hisehoan’ny fisabakana hoy ny sasany, hoy kosa ny hafa hoe fomba fanilikihina ireo avara-pianarana mandranto ravin’ahitra any ivelany izany.
Ny any Sina kosa efa folo taona lasa izay dia nanambara ny fitondrana fa tsy mila mivesatra ny zo an’olom-pirenena sinoa ireo olona nihorim-ponenana any ivelany. Tsy very anjara noho izany ireo teratany avy any rehefa mody any amin’ny taniny. Famporisihina izany angatahan’ireo Sinoa any ivelany ny zom-pirenena any amin’ny tany onenany. Manana olona mifamatotra aminy tsy mila miseho izany ny firenena Sinoa. Hery lehibe izany.
Raha ny eto Madagasikara no jerena, mizara roa ny fihetsikin’ireo Malagasy mizaka ambon’ny maha olom-pirenena azy ny zo an’olom-pirenena frantsay. Ao ireo rehefa eto an-toerana tsy miandrandra ny fisitrahana ny maha “citoyen frantsay” azy. Eo koa anefa ireo Malagasy miady laharana ho Frantsay rehefa eto an-toerana ary rehefa sendra ny fanavakavahana any am-pita vao mahatsiaro ny maha Malagasy azy hany ka miezaka mba ifanerasera amin’ireo mpiray tanindrazana izay hiatakatahana eto an-toerana.